Vaovao - Inona no atao hoe Plant Concrete Mobile?
Manampy an'izao tontolo izao izahay hitombo hatramin'ny 2015
Plant Concrete Batching Mobile
Zavamaniry batching Concrete Stationary
Mpifangaro konkritera BHS
Mpanatitra visy simenitra
Rafitra fampifangaroana batching
Inona no atao hoe zavamaniry beton-tanana?
Ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny tetik'asa fananganana, ankehitriny ny beton dia vokarin'ny zavamaniry vita amin'ny beton miaraka amin'ny haitao mifangaro lanja sy mifangaro. Ny agregate, simenitra, rano ary additives dia nolanjaina tokoa amin'ny mizana mizana mifanaraka amin'ny resipeo vita amin'ny beton izay voafaritra toy ny fitsapana natao tany amin'ny laboratoara teo aloha ary mifangaro homogenezy avy amin'ny mixer vita amin'ny beton haingana mba hamokarana beton avo lenta.
Taloha, ny zava-maniry beton rehetra dia mamokatra ho zavamaniry beton-tany ary na ny kely indrindra aza dia azo apetraka ao anatin'ny fotoana iray aorian'ny fitaterana kamio efatra ka hatramin'ny dimy; ny zavamaniry mijanona toy izany dia namokatra simenitra teo amin'ny toerana iray nandritra ny taona maro. Ny fitomboan'ny isan'ny tetik'asa fananganana sy ny habetsaky ny simenitra takiana amin'ireto tetik'asa ireto, ary koa ny filàna hamita ireo tetik'asa ireo ao anatin'ny fotoana fohy, dia nitarika ny orinasam-pananganana hamokatra ny beton ilain'izy ireo amin'ny tetikasany. Tamin'izany fotoana izany, ny orinasam-panorenana dia mila zavamaniry beton finday, mora kokoa, mora entina ary mora apetraka kokoa noho ny zavamaniry beton-tany mijanona, satria mila mamindra ny zavamaniry amin'izy ireo avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa izy ireo rehefa nahavita ny tetikasany. Zavamaniry mivaingana mivaingana dia noforonina mba hanomezana fahafaham-po ireo filàna ireo.
Zavamaniry mivaingana mivaingana dia misy singa mitovy amin'ny zavamaniry vita amin'ny beton ihany, izay ametrahana ireo chassis misy kodiarana sy kodiarana ireo singa ireo. Rehefa tratran'ny traktera io chassis io dia azo entina mora foana ilay zavamaniry vita amin'ny beton.
Fotoana fandefasana: Sep-28-2020
Ny orinasa dia miompana indrindra amin'ny fitaovam-pambolena sy ny serivisy amin'ny serivisy, anisan'izany ny silo simenitra, conveyor visy simenitra, mixeur simenitra, conveyor fehikibo ary rafitra fampifangaroana agregate, hanomezana tolotra tokana ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Ny mahasamihafa ny protectionio tontolo iainana ...
28,10,20Jona 16, 2017
Injeniera lehibe mifangaro zavamaniry inte ...
28.09,20Jona 16, 2017
Tsenan'ny zavamaniry miady beton manerantany pat ...
18.09,20Jona 16, 2017
CONCRETE BATCHING PLANT MARKET HITAMBATRA ...
15.09,20Jona 16, 2017
Masinina mitambatra mandeha ho azy, Rafitra fanangonana mitambatra, Fitaovana fampiroboroboana zezika mandeha ho azy, Concrete Mixer Spare Parts, Rafitra fanangonam-bokatra mandeha ho azy, Rafitra fanangonam-bokatra mitambatra,